नेपालमा भन्दा भारतमा पेटभरि खान नपाउने धेरै ! – Khabar Silo
सामान्यतः बियर पिउँदा कुनै फाइदा हुँदैन र यसले मोटोपन बढाउँछ भन्ने आम विश्वास छ । तर बियर शरीरका लागि हितकारी पनि छ भन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । ओरेगन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बियर पिउँदा ९ प्रकारका फाइदा हुन्छन् । बियर पिउनाले मिर्गौलामा पत्थरी हुने सम्भावना कम हुन्छ । प्रत्येक दिन एक वा दुई गिलास बियर […]
Posted on January 26, 2021 Author khabar silo
सुन्दर तथा आर्कषक अनुहार कसको राजाईमा नपर्ला र ? अनुहारमा आएको दाग धब्बाका कारण हामी मध्ये धेरै जना लज्जित हुनु परेको होला । दाग धब्बा हटाउनका लागि बिभिन्न महंगो केमीकल युक्त शौन्दर्य सामाग्रीको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ होला। तर यस्ता सामाग्रीको प्रयोगले अनुहारको शुन्दरता बढ्नुको साटो झनै हराएर जाने गर्दछ। हामी यहाँ यस्तो घरेलु बिधिका […]
काठमाडौँ । दुब्लो पातलो व्यक्ति सँधै मोटाउन के गर्नुपर्छ भनेर चिन्तामा परिरहेको हुन्छ भने मोटा व्यक्ति कसरी घट्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छ । सहरिया व्यस्त जीवनशैली बिताईरहेका नागरिकका लागि दैनिक शारिरीक कसरतको समय हुँदैन भने खानपिनमा पनि धेरै विचार पुर्‌याउन सकिरहेको हुँदैनन् । ठूलो पेटले देख्दा भद्दा देखिनेमात्र होइन् विभिन्न रोग पनि भित्र्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले […]